အာလူး ပန်ကိတ် - အသားကြော် | ကြော်တယ်။
Alicia tomero | 25/10/2021 17:21 | အဆင့်မြှင့်တင် 25/10/2021 17:25 | ချက်ပြုတ်နည်းများ, ပျော်စရာချက်နည်းများ
မတူကွဲပြားသော ချက်ပြုတ်နည်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများကို မျှဝေရန် ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်သော အဆိုပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ အာလူးမုန့်ညက်နဲ့ လုပ်မယ့် ဟင်းချက်နည်းတစ်မျိုးပါ။ minced အသားဖြည့်အရသာရှိသော ပန်ကိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမည့်၊
ဒီဟင်းချက်နည်းတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရသာကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူ Lasagna ။
အဘိတ်အချိန်: 60 မီတာ
ဂျုံမှုန့် ၁၈၀ ဂရမ်ခန့်
minced အမဲသား၏ 400 ဂရမ်
ကုန်တယ် parsley တစ်ဇွန်း
ဒိန်ခဲ5အချပ်
ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲ 140 ဂရမ်
ငါတို့ဖြတ်ခဲ့တယ် သေးငယ်သောအပိုင်းပိုင်းအတွက်ကြက်သွန် ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံခွာပြီး အတုံးသေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါ။
ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ထည့်ထားတယ်၊ သံလွင်ဆီ၏ဂျက်လေယာဉ်။ ပူလာလျှင် ကြက်သွန်နီကို ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ရောနယ်ပြီး ပျော့သွားပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းထည့်သည် minced အသားဆား၊ ငရုတ်ကောင်းတို့နဲ့ ရောနယ်ပြီး ကြက်သွန်နီနဲ့ အအေးခံထားပါ။ အဆုံးမှာ အညိုရောင်ဖြစ်နေပါစေ။ paprika တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း.
ငါတို့အခွံ အာလူးကိုသေးငယ်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်. ရေနဲ့ ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ဆားအနည်းငယ်နဲ့ ပြုတ်ထားလိုက်ပါ။
ပြုတ်တဲ့အခါ၊ ငါတို့သူတို့ကိုစစ်ထုတ်တယ် ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲမှာ ထည့်လိုက်တယ်။
လမ်းဆုံလမ်းခွ၏အကူအညီဖြင့် ငါတို့က သူတို့ကို နှိပ်စက်တယ်။ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းတို့ဖြင့် ပြုပြင်ပါ။ ကြက်ဥ နှင့် လှီးထားသော နံနံပင် တစ်ဇွန်းထည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့က ထပ်ပေါင်းတယ်။ ဂျုံမှုန့်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီး ချောမွေ့သော မုန့်စိမ်းကို ဖန်တီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မုန့်စိမ်းကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပုံစံ ဘောလုံးနှစ်လုံး။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန့်စိမ်းဘောလုံးကို ပြားချပ်စေပါသည်။ အရွယ်တူ ကိတ်မုန့်တစ်ခု ငါတို့ဘယ်ဒယ်ကိုသုံးမလဲ။
မုန့်စိမ်းကို ဒယ်အိုးထဲထည့်၊ ထည့်ပါ။ ဒိန်ခဲအချပ်ပါးပါးလှီးထားသောအသားကို အပေါ်မှတင်ကာ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ခြစ်ဒိန်ခဲ.
အခြားမုန့်စိမ်းဘောလုံးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်အဆင့်၌ထိုအတိုင်းလုပ်ပါ။ ငါတို့က ဆန့်ပြီး အဲဒါကို ကိတ်မုန့်အဖြစ် ပုံသွင်းတယ်။ပထမ အရွယ်အစားနှင့် တူညီပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို အပေါ်မှတင်ပြီး အစွန်းများကို လက်ချောင်းများဖြင့် ဖိထားကာ အလုံပိတ်နေစေရန်။ အညိုရောင်ကို ထားလိုက်ပါ။ နိမ့်ကျအပူကျော် 15 မိနစ် အခြားတဖက်တွင်မူ။ ပြီးရင် omelette လိုပဲ တစ်ဖက်ကို အညိုရောင်ပြောင်းပါမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်ကိတ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ နှစ်ဖက်စလုံးကို ပူပူနွေးနွေး ကျွေးပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ပြန်လည် » ချက်ပြုတ်နည်းများ » အသားနဲ့တွဲထားတဲ့ အာလူးပန်ကိတ်
အစိမ်းရောင်ပဲ၊ အာလူးနှင့်ဆလတ် pesto တို့နှင့်ခေါက်ဆွဲ